बढ्दो हृदयाघात समस्यामा अस्वस्थ खानपानको भूमिका कति ? « Nepali Digital Newspaper
बढ्दो हृदयाघात समस्यामा अस्वस्थ खानपानको भूमिका कति ?
२ चैत्र २०७८, बुधबार १६:२२
शरद् शर्मा, काठमाडौं
मानिसका जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले नेपालमा हृदयाघातका बिरामी बढिरहेका छन् । अस्वस्थ खानपान र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन रोगका कारक मानिएका छन् । दश वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हृदयाघात हुनेको सङ्ख्यामा दोब्बर वृद्धि भएको छ ।
निष्क्रिय जीवनशैली, चिन्ता, युवावस्थामा नै चुरोट, सुर्ती तथा खैनी सेवन र चिल्लो-बोसो खानाले हृदयाघातका बिरामी बढिरहेको शहीद गङ्गालाल हृदय राष्ट्रिय केन्द्रका निर्देशक डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बताउनुभयो । घरभन्दा बाहिरको अस्वस्थ खानपान गर्नाले पनि हृदयाघातका बिरामी बढिरहेको चिकित्सकले बताएका छन् । केन्द्रमा सन् २०१२ मा ४९५ जनामा हृदयाघात भएकामा ६ वर्षपछि २०१८ मा तीन गुणा बढेर एक हजार ४६० जना पीडित भएका थिए । उहाँका अनुसार २०२० मा एक हजार ६९८ र सन् २०२१ मा दुई हजार २७३ जना सो रोगका कारण अस्पतालमा भर्ना भएका छन् ।
डा. अधिकारीले २०२१ मा अस्पताल भर्ना भएका बिरामीमध्ये प्रायः हृदयाघात भएका हुन् । हृदयाघातका बिरामी बढे पनि सन् २०२० मा कोरोना भाइरसका कारणले अस्पतालमा मुटु रोगका कम बिरामी आएका थिए । ‘विगत १० वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने मुटु रोगका बिरामीमध्ये ५० प्रतिशत त हृदयाघात भएका बिरामी मात्र नै छन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा हृदयाघातका विरामी दिनप्रतिदिन बढिरहेको गङ्गालालमा आएका बिरामीबाट नै थाहा हुन्छ ।’
उहाँका अनुसार अस्पतालमा दैनिक चार जना हृदयाघात आउने गरेका छन् । वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डा भगवान् कोइराला पनि अस्वस्थ खानपान, तनाव, बाहिरी प्रदूषण र वंशाणुगत कारणले गर्दा मुटुको नली चाँडै बन्द भएर हृदयाघात हुने गरेको बताउनुहुन्छ । ‘धूमपान, मधुमेह र उच्च रक्तचाप भएका मानिसको मुटुको नली र अन्य नली बाक्लो हुँदै हृदयाघातले आक्रमण गर्छ । यस्तै कोलेस्टेरोल (मुटुमा हुने बोसो), शारीरिक अभ्यासको कमी पेट बढ्ने, पसिना ननिकाल्ने, तनाव, बाहिरी प्रदूषण र वंशाणुगत कारणले गर्दा मुटुको नली चाँडै बन्द हुने गर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वस्थ्य जीवनशैली अपनाउने, खाना धेरै नखाने, स्वच्छ खाने, शारीरिक अभ्यास गर्ने, चुरोट नखाने, नियमित व्यायाम गर्न सके हृदयाघातबाट बच्न सकिन्छ ।’
चुरोट सेवन गर्ने, मधुमेह, कोलेस्टेरोल र उच्च रक्तचाप भएका मानिसमा हृदयाघात बढी हुन्छ । तीमध्ये चुरोट पिउने मानिसमा हृदयाघात हुने सम्भावना बढी हुने गरेको निर्देशक डा. अधिकारी बताउनुहुन्छ । अहिले युवावस्थामा नै चुरोट सेवन गरेको पाइन्छ । उहाँका अनुसार हृदयाघात भएकामध्ये ६५ प्रतिशत चुरोट सेवन गर्नेहरू हुन्छन् । तीमध्ये ४० वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति धेरै छन् ।
डा कोइराला पनि हृदयाघात ६० वर्षमाथिकामा हुने गरे तापनि चुरोट खाने व्यक्तिमा भने ४० वर्षमुनि पनि हुने गरेको बताउनुहुन्छ । ‘ चुरोट सेवन गर्नाले युवावस्थामा नै हृदयाघात हुने सङ्ख्या अत्यधिक बढदै गएको छ’, उहाँले भन्नुभयो । चालिस वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिले चुरोट सेवन गर्छ भने उसलाई हृदयाघात हुने सम्भावना नखानेको तुलनामा आठ गुणाले बढी हुने डा अधिकारीको भनाइ छ ।
एउटा एन्जिओप्लास्टी गर्नका लागि रु एक लाख ५० हजार खर्च लाग्छ । त्यति रकम तिर्न नसक्ने गरिब- असहायका लागि केन्द्रले दुई वर्षदेखि भने निःशुल्क एन्जिओप्लास्टी गर्ने गरेको छ । तीन प्रकारका हृदयाघातमध्ये पनि नेपालमा सबैभन्दा धेरै स्टेमी हृदयाघात हुन्छ जुन भएका मानिसलाई समयमा नै अस्पताल पुऱ्याउन सके बचाउन सकिन्छ । ‘हृदयाघात भएको मानिसका मुटुमा रगतको आपूर्ति बन्द भएपछि दुख्न थाल्छ । मुटुको मासु मरिसकुन्जेल छाती दुख्ने गर्छ । मुटु दुखिरहेका बेलामा नै अस्पतालमा बिरामी पुऱ्याउन सके बचाउन सकिन्छ ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘ बिरामी आएको १२ घण्टामा मुटुको प्राइमरी एन्जिओप्लास्टी ( मुटुको नशा खोल्ने प्रविधि) शल्यक्रिया गरी नसा खोलेर बचाउन सकिन्छ ।’
नेस्टेमी हृदयाघात भएका बिरामीलाई भने केही समयपछि मात्र उपचार गरिन्छ । त्यस्ता बिरामीलाई भर्ना गरे केही दिनपछि शल्यक्रिया गरेर बचाउन सकिन्छ । केन्द्रले प्राइमरी एन्जिओप्लास्टी गरेका बिरामीलाई चार-पाँच दिनमै अस्पतालबाट घर पठाउँछ ।
पहिलो पटक हृदयाघात हुँदा १०० मध्ये २३ जनाको मृत्यु अस्पताल नपुग्दै हुने गर्छ । हृदयाघात भएर अस्पताल आएका बिरामीमध्ये सात प्रतिशतको अस्पतालमै मृत्यु हुने गरेको छ । नेपालमा केन्द्रबाहेक मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर, नर्भिक इन्टरनेशनल अस्पताल तथा विराटनगर-धरान-बुटवल-नेपालगन्ज भरतपुरका अस्पतालमा पनि समेत एन्जिओप्लास्टी हुने गर्छ ।
विश्वमा मुटुरोग अस्पतालले दिने सेवामध्ये एक दुई वटा मात्र सेवा केन्द्रले दिन सकेको छैन । भारतलगायत देशमा मुटु प्रत्यारोपण हुने गरेकामा नेपालमा सम्भव भए पनि प्राविधिक रूपमा गाह्रो र खर्चिलो भएको उहाँको भनाइ छ । भारतमा सय बिरामीको मुटु प्रत्यारोपण हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । धेरै खर्चिलो हुनाका साथै प्राविधिक रूपमा मुटुको प्रत्यारोपण नेपालमा गाह्रो छ । दुई मिर्गौैलामध्ये एउटा कसैलाई दियो भने मानिस स्वस्थ्य भएर बाँच्न सक्द’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर मुटु अर्कालाई दिने भनेको ब्रेनडेथ (मस्तिष्क मृत्यु) भएको मानिसले मात्र दिने हो । त्यसका लागि एउटा मानिस मर्नु पऱ्यो । मरेको मानिसबाट मुटु निकाल्न पऱ्यो, अर्को मानिस अप्रेशन गर्न तयार हुनुपऱ्यो । एउटा समयभित्र मुटु प्रत्यारोपण गर्ने हो । मुटु दिने मानिसको मुटु लिने मानिसकामा मिल्नुपऱ्यो । त्यसैले मुटु प्रत्यारोपण प्राविधिक रूपमा गाह्रो छ ।’
उहाँ आफूले अध्ययनकै क्रममा नेपालमा मुटु प्रत्यारोपण एक-दुई केश मात्र गर्न सक्ने बताउनुहुन्छ । मुटु प्रत्यारोपण गर्ने मानिस आर्थिक रूपमा पनि सक्षम हुनुपर्छ । एक व्यक्ति दुर्घटना भएर मर्नेबित्तिकै मुटु प्रत्यारोपण गरिने बिरामीको रगत परीक्षण गरेर मिल्ने नमिल्ने हेर्नुपर्छ ।